फ्रान्सेली पुरुष र कसरी मिति तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेम
कवर, अधिक आधा भन्दा एक लाख वर्ग किलोमिटर, फ्रान्स, एक ठूलो देश बफरिङ बाँकी युरोप देखि एटलान्टिक महासागर । हुनत आक्रमण आतंककारीहरू द्वारा विभिन्न स्थानहरुमा मा वर्ष को पछिल्लो दम्पतीले, देश राम्रो-द्वारा सुरक्षित आफ्नो सेना र प्रहरी सेना । यो साँचो हुन सक्छ कि फ्रान्सेली आनन्द भएको राम्रो पटक र जस्तै गर्न मजा छन्, तिनीहरूले पनि परिष्कृत र परिष्कृत, र एक स्पर्श ल्याउन शान मा आफ्नो सम्बन्ध.
यो जोडी, फ्रान्सेली पुरुष हुनेछ राम्रो-शिक्षित र सामान्यतया हुन खुसीसाथ कार्यरत यसरी धान्न सक्षम एक बराबर सन्तुलन मा कुनै पनि सम्बन्ध छ । निर्णय गर्न मदत संग दिन-देखि-दिन चलिरहेको को एक घर, त्यो हुन सकेन सिद्ध साथी को लागि कुनै पनि गम्भीर विचारका व्यक्ति । यो बिल्कुल विशिष्ट मानिसका लागि राजधानी देखि, पेरिस, तर पनि जीवित ती साना शहर र शहरहरू. उत्तिकै घर मा भान्सा मा वा योजना एक यात्रा को प्रोभेन्स, आफ्नो फ्रान्सेली साथी हुनेछ पूरा हुन सबै पक्षमा कायम को एक ठूलो सम्बन्ध छ । र, भइरहेको छ, संग यस तरिका को विश्व, उहाँले खुसीसाथ चित मा कुनै पनि विषय र जोड दिंदै, एक बिन्दु वा थप केही सुविधा उजागर गर्न वा बलियो बन्धन बीच. तापनि एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, फ्रान्सेली सकिन्छ उक्साए कुरा गर्न अंग्रेजी मा र यसरी संचार गर्न संभावना छैन समस्या छ । जबकि केही विचार हुन सक्छ कि फ्रान्सेली पुरुषहरु पनि कलिलो र, वास्तविकता प्रमाणित अन्यथा छ । तिनीहरूले राम्रो लुगा र हेरविचार बारेमा आफूलाई बस जस्तै, सबैभन्दा अन्य मानिसहरू. विगत समयमा शताब्दीको फ्रान्स स्वीकार जन अध्यागमन, नेतृत्व छ जो फ्रान्सेली मानिसहरूलाई स्वागत गर्न आफ्नो बहुसांस्कृतिक बाटो-को-जीवन । त्यसैले, एक यात्रा यो देश तपाईं परिचय हुनेछ, एक वैश्विक मिश्रण को, जो अधिकांश खुसीसाथ स्वीकार एक नयाँ आधुनिक जीवन शैली राखन जबकि पकड को आफ्नै परम्परा, यसरी ल्याउन नयाँ विचार मा यो पुरानो देश हो । साधारणतया, मान्छे देखि फ्रान्स आशिष् छन् संग विशिष्ट युरोपेली बेहोरा.
खुला गर्न बारेमा छलफल वर्तमान मुद्दाहरू छन्, तिनीहरूले उत्तिकै रोमान्टिक जब यो समय छ
कृपया आफ्नो महिला । र यो यी अनमोल क्षण ल्याउन कि त उनलाई धेरै खुशी, विशेष गरी ढिलो, कोमल चुम्बनले कि तिनीहरूले इनाम दिनु मा आफ्नो महिला । यो हो कि एक भावना देखि आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाको र बनाएको छ बलियो माध्यम ले आफ्नो प्राकृतिक तरिका भइरहेको को प्रकारको, र खुला । आफ्नो अनुकूल चरित्र तिनीहरूलाई सहायता बनाउने नयाँ कनेक्शन हरेक हप्ता. उदाहरणका लागि, बाहिर जा गर्दा एक पेय लागि सबैभन्दा प्राकृतिक पाउन समय नयाँ मित्र छ । पहिले बताइएझैं, फ्रान्सेली मान्छे जस्तै सिक्न संस्कृति, खेल मा संलग्न, र पालन, धेरै अन्य गतिविधिहरु. दृश्य अर्को बिन्दुबाट, तिनीहरूले पनि प्रेम गर्न सामाजिक नेटवर्क प्रयोग जस्तै, ट्विटर, र बनाउन को व्यापक प्रयोग, गुगल । सबैभन्दा फ्रान्सेली मान्छे पनि यात्रा गर्न रुचि, केही मनपर्ने गन्तव्यहरू मा रहेको अमेरिका र सहित शहर यस्तो न्यूयोर्क, लस एन्जलस र नयाँ अर्लिन्स.
अमेरिका यति लोकप्रिय छ किनभने, धेरै फ्रान्सेली पुरुष जस्तै पूरा गर्न र मिति अमेरिकी महिला । भन्न अनावश्यक, एउटै साँचो छ लागि फ्रान्सेली महिलाहरु
तिनीहरूले पनि भ्रमण गर्न रुचि, को बेलायत मा एक विशेष लन्डन, र, गर्न नजिक को मातृभूमि, इटाली, जहाँ तिनीहरूले जस्तै बनाउन, मित्र संग, यो इटालियंस कारण स्नेह को आफ्नो प्रकृति । यो कहिलेकाहीं बताए फ्रान्सेली मान्छे पनि धेरै लाग्छ, एक कठिन कुरा बुझ्न देखि एक गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति दृष्टिकोण को छ । कहिले काँही, तपाईं आवश्यक छौँ लिन क्रम केही दिन शान्त राख्न तपाईं छैनन् भने बिल्कुल लागि तयार गम्भीर छलफल भएको छ । सामान्यतया, आफ्नो फ्रान्सेली मिति मा हुनेछ एक उत्कृष्ट, अनुकूल स्थिति आनन्दित, राम्रो समय वा केही प्रकार को खेल संग परिवार वा मित्र, र विशेष गरी जब एक मिति मा आफ्नो चुनिएका महिला । भावुक, हास्यास्पद छ, र कहिले काँही पागल, फ्रान्सेली मानिस हुने थिएन गर्न बैठक एक गाढा. तापनि तपाईं शायद उहाँलाई भित्र-बाहिर आफ्नो पहिलो तारीख मा, तपाईं पक्का हुन सक्छौं कि उहाँले हुनेछ मीठो, रोमान्टिक र आदरणीय छ । पनि, सबैभन्दा मान्छे, उहाँले हुनेछ जस्तै खान राम्रो, स्वस्थ खाना, त्यसैले केही अवस्थामा यो हुन सक्छ एक ठूलो विचार गर्न उहाँलाई देखाउन आफ्नो पाकशाला कौशल छ । जब यस्तो एक मानिस प्रेम मा पतन एक महिला संग, उहाँले सधैं सबै भन्दा राम्रो के उहाँले सक्छन् । सेट अप गर्दा, आफ्नो डेटिङ प्रोफाइल, हुन इमानदार र खुला । सम्झना लिन रक्सी को एक बोतल संग, तपाईं जब बैठक को एक समूह फ्रान्सेली मान्छे, र चिन्ता छैन केहि, फ्रान्सेली पुरुष छन्, स्वाभाविक सुरक्षा र अनुशासन छ । तापनि खपत को रक्सी सामान्यतया फ्रान्सेली, तिनीहरूले धेरै शायद धेरै पिउन भनेर विश्वास, यो अनादर गर्ने हुन मातेको । जब तपाईं निर्णय गर्न मिति देखि एक मानिस जस्तै एक ठूलो देश, राख्न आफ्नो मन खोल्न र कहिल्यै भूल कि प्रत्येक व्यक्ति फरक छ र छ विभिन्न आवश्यकता छ । आफ्नो धनी सांस्कृतिक सम्पदाको लामो बाटो जान्छ बनाउने तिर यी मान्छे यस्तो रोचक मित्र र उत्कृष्ट साझेदार । फ्रान्सेली मानिस पक्का, उहाँले सजग तपाईंको चासो, किनभने कहिलेकाहीं आफ्नो मन गर्छन हुनेछ लक्षविना हिड्नु गर्न अन्यत्र. यदि सांस्कृतिक फरक बनाउँछ तपाईं डेटिङ फ्रान्सेली पुरुष, यो शायद एक राम्रो विचार दिन तिनीहरूलाई एक सानो समय छ । आनन्द आफ्नो खाद्य पदार्थ, पूरा, आफ्नो मित्र र समयमा आराम समय सँगै बिताए छ । उहाँलाई लागि, त्यहाँ छ बिल्कुल केही गलत भइरहेको बारे रोमान्टिक भने त र जब तपाईं चुम्बन गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँलाई चुम्बन छ । राम्रो किस्मत ।
← एक परिचय संग एक
गुरु - कामुक सेक्स भिडियो च्याट बिना दर्ता →